वर्षका 'स्टार'- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
हरेक चरित्रलाई जीवन्तता दिन अब्बल मानिन्छन्, भोलाराज सापकोटा । यो अभिनय कुशलताको स्रोत र निरन्तर सक्रियताको राज के होला ?
काठमाडौँ — सात कक्षामा पढ्दै थिए, भोलाराज सापकोटाले नाटक खेल्ने मौका पाए  । जान्या केही थिएन तर रमाइलो लाग्यो रे ।
हेर्नेहरूले तारिफ गरे । स्कुलकै अरू एकाध नाटक खेले । सन्तुष्टिको मात्रा बढ्दै गयो । अभिनय गरेर के पाइन्छ ? हेक्कै थिएन । निरन्तर लागिरहे । नाटक खेलेपछि टेलिफिल्म खेले । रणवीर कपुरसँग बर्फी खेले । उनी अभिनीत नेपाली फिल्म पनि एक दर्जन पुग्नै लाग्यो । भोलाराज हाँस्दै भन्छन्, ‘के पाउँछु/पाएँ, कहिल्यै लेखाजोखा गरिनँ । आफ्नै तालमा लागिरहें ।’ त्यसो नहुँदो त, न अनेक आरोह/अवरोहको सामना गर्ने साहस आउँथ्यो, न यो अविराम यात्रा सम्भव नै हुन्थ्यो ।
गत शुक्रबार कागजपत्र प्रदर्शन भयो । चचहुई नामक फिल्म छायाँकन हुँदै छ । दुवैमा छन्, भोलाराज । कागजपत्रको त मेरुदण्ड उनै हुन् । फिल्ममा उनलाई सरकारी हुलाक कार्यालयको पियनका रूपमा देख्न पाइन्छ । उनी त खुसी नै छन् तर पत्नीचाहिँ विदेश जानु भनेर किचकिच गरिरहन्छिन् । चचहुईको सुटिङका लागि पोखरा पुगेका भोलाराजले फोनमा भने, ‘यो चरित्रमा धेरै युवाले आफूलाई पाउँछन् । जो परिवारकै खुसीका लागि आफ्नो देश छोड्न बाध्य हुनुपर्छ ।’ कागजपत्रको व्यापार सुखद रहेन तर फिल्म हेर्ने जोकोहीले भोलाराजको कामको प्रशंसा गरेका छन् । कारण उही, उनले पात्रमा आफूलाई पूरापुर ढालेका छन् । हुलियाबाट मात्र होइन, आनीबानी, बोलीचाली र मनोविज्ञानबाटै । र, अभिनयको यो मूल मन्त्र सिकेका हुन्, आरोहण गुरुकुलमा । त्यसैले भोलाराजलाई नियालिरहँदा गुरुकुल भुल्नै सकिन्न ।
हेटौंडाको तरंग सांस्कृतिक परिषद्सँग जोडिएर बेलाबखत नाटक गर्थे । अलिपछि सडक नाटक देखाउन नागढुंगादेखि जलेश्वरसम्म चहारे । पुगे । अभिनयप्रतिको भोक अझ बढ्यो, त्यहीबेला राष्ट्रिय नाचघरमा अभिनय प्रशिक्षण लिने मौका मिल्यो तर उनलाई हेटौंडा छोड्न त्यति सजिलो थिएन । त्यहाँ उनका साथी थिए, रामशरण दुलाल । मह जोडीबाट प्रभावित भएर रामशरण र भोलाराज पनि एक भएका थिए । ‘मामा–भान्जा’ जोडीको नाममा उनीहरूले हेटौंडा र आसपासका क्षेत्रमा टन्नै प्रहसन गर्थे । काठमाडौं आउँदा त्यो सहकार्य टुट्थ्यो । भोलाराज सम्झन्छन्, ‘त्यो पल निकै कठिन थियो तर मैले काठमाडौं आएर आफ्नो अभिनय तिखार्ने निधो गरें ।’ यहाँ उनका गुरु थिए, हरिहर शर्मा, सुनील पोखरेल, प्रभाकर शर्मा र वीरेन्द्र हमाल । एक वर्ष सिकें, केही होला जस्तो लागेन । हेटौंडा फर्किएर एउटा एनजीओमा जागिर खाएँ । तलब राम्रै थियो । तर मन रत्तिएन । ‘जति कष्ट आए पनि झेल्ने’ आफैंसँग वाचा गरे र फेरि काठमाडौं आए । यसपटकचाहिँ उतिविघ्न ठक्कर खानुपरेन । नाचघरका गुरु सुनीलको साथ पाए ।
नाचघरमा भोलाराजको लगनशीलताबाट प्रभावित थिए सुनील । त्यसैले गुरुकुलको पहिलो ब्याचमा भोलाराजलाई पनि लिए । गुरुकुलको नियमित बसाइ र सिकाइले भोलाराजको अभिनयप्रतिको बुझाइ बदलिँदै गयो । आत्मविश्वासको आयतन पनि फराकिलो हुँदै गयो । ताराबाजी लैलै, मायादेवीको सपना, आरूका फूलका सपना, अग्निको कथाजस्ता चर्चित नाटकमा क्षमता पस्कन पाए । त्यतिबेला च्यानल नेपालमा फिफ्टी–फिफ्टी नामक कमेडी सिरियल खेल्थे । अरू केही हुन्नथ्यो, जसरीतसरी हँसाउने मात्र । अग्निको कथा नाटक देखाउन कोलकाता जाँदै गर्दा लेखक अभि सुवेदीले भनेछन्, ‘रंगमञ्चमा यति गम्भीर चरित्रमा अभिनय गर्छौ तर सिरियलमा किन जोकर जसरी देखापर्छौं ? तिम्लाई सुहाउँदैन त्यस्तो काम ।’ भोलाराज हाँस्दै भन्छन्, ‘अभि सरले भनेको कुरा म आफैंलाई महसुस भइरहेको थियो । त्यसैले त्यो सिरियल र त्यस्तो काम चटक्कै छोडिदिएँ ।’
गुरुकुल भोलाराजलाई किन पनि विशेष लाग्छ भने त्यहाँ हुँदाहुँदै अर्थात् सन् २०१२ उनलाई बलिउडबाट अफर आयो, बर्फीका लागि । अनुराग बसुजस्ता गिनेचुनेका निर्देशकसँग काम गर्न पाइएला भनेर सोचेकै थिएनन् तर मुम्बई गएर अडिसन दिएपछि सबथोक सम्भव भयो । बर्फीमा उनलाई रणवीर कपुरको साथीका रूपमा देख्न पाइन्छ । समीक्षकहरूले समेत भोलाराजको भूमिका र अभिनय मन पराए । तर त्यहीं बसिरहने मेलोमेसो मिलेन । बरु यता आएर फिल्म खेल्न थाले ।
भोलाराज अभिनीत झुम्की, कुम्भकरण, रणवीर, पण्डित बाजेको लौरी, गोपीलगायत चलचित्र रिलिज भएका छन् । प्रायः फिल्ममा सहायक भूमिका हुन्छ तर त्यसमै आफ्नो विशिष्टता झल्काउँछन् । हिरोको परम्परागत मानकमा अटाउँदैनन् उनी । कद होचो छ । यही कारण उबेला नाटक त गुमाउनुपरेको थियो भने फिल्ममा झन् सकस पर्ने भइहाल्यो । तीतो–यथार्थ सुनाउँछन् उनी, ‘कलाकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन त हुँदै छ । तर अझ पनि यहाँ अभिनय क्षमताभन्दा रूप र हुलियालाई ज्यादा महत्त्व दिइन्छ । म आफैं यो प्रवृत्तिको सिकार हुँ ।’
तर पनि भोलाराजलाई कुनै गुनासो छैन । हिजो हेटौंडाबाट रित्तो हात आएका थिए, अहिले नाम कमाएका छन्, जीवन धान्न कष्ट छैन । अभिनय वर्कसप गराएर र कास्टिङबाट पनि बेलामौकामा कमाइ हुन्छ । अभिनय गर्दै हिँड्दा घरमा गाडी थियो । बुबाआमाको चाह थियो, छोराले गाडीको व्यापार सम्हालोस् । भन्छन्, ‘त्यता लागेको भए अहिले घर बनाइसक्थें । अभिनयमा लागेर घर बनाउन नसके पनि मनचाहिँ खुसी छ । जीवन चलिरहेकै छ ।’
प्रकाशित : चैत्र १५, २०७५ १२:००